Oonozakuzaku baseMadrid bamenywe kwi-UNWTO Bribery Cocktail e-Ritz: Ngubani ohambayo?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Oonozakuzaku baseMadrid bamenywe kwi-UNWTO Bribery Cocktail e-Ritz: Ngubani ohambayo?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kule veki unobhala-Jikelele we-UNWTO uya kube esonwabisa bonke oonozakuzaku bamazwe angamalungu avunyiweyo eSpain nge-cocktail emnandi kweyona hotele ikhethekileyo nebiza kakhulu eMadrid- iRitz.
I-UNWTO iyakuthanda ukunyoba oonozakuzaku ngesidlo sangokuhlwa okanye iziselo - kwaye iyabonisa.
UZurab Pololikashvili, unobhala-jikelele okhoyo ngoku weWorld Tourism Organisation uza kuthatha inyathelo kule veki, ngokolwazi olufunyenwe ngu. eTurboNews kwimithombo.
NgoJanuwari kwakhona isidlo sakusihlwa eMadrid, ngoko le yinombolo yesibini.
Ngoobani abathunywa abazimisele ukuya kumsitho onjalo oxhaswe yiGeorgia okanye i-UNWTO, kwaye ngokucacileyo yenzelwe ukukhusela isiqinisekiso seZurab Pololikashvilnakwithuba lesibini leNdibano yeZizwe eziManyeneyo
Isiganeko senziwe ngokucacileyo, ngoko ke ama-Ambassadors akayi kubuza imibuzo okanye axhase ivoti eyimfihlo kwiNdibano Jikelele. Ngethemba, uluhlu lweendwendwe luya kuvuza.
Indawo yaseMadrid yiRitz:
IsiMandarin Oriental Ritz, IMadrid libhotwe le-Belle Époque elibutofotofo elibekwe kuNxantathu weGolide odumileyo woBugcisa baseMadrid. Ngaphezulu kweminyaka eyi-110, ihotele ibiphethe abasebukhosini, abantu abahloniphekileyo, kunye nezinye zeendwendwe ezibalaseleyo ezivela kwihlabathi jikelele. Lo mhlaba ubukekayo ungumzekelo wobunewunewu kunye nokugqwesa.
Ukuba neNdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO isuka eMorocco isiya eMadrid ngomzuzu wokugqibela kulindeleke ukuba uninzi lwamazwe azimase indibano aya kumelwa ngoonozakuzaku abazinze eMadrid.
Le yinzuzo ecacileyo kwaye ibalwe kuZurab ukukhusela ivoti yakhe yokuqinisekisa kwakhona. UZurab wayengunozakuzaku weRiphabhlikhi yaseGeorgia eMadrid iminyaka eliqela kwaye uyayazi indlela yakhe kuluntu lwezozakuzo.
Sele eyenze yanzima kwaye ibiza kakhulu ukuthatha inxaxheba kwabaphathiswa bezokhenketho. La mazwe anabameli baseSpain banokuthumela oonozakuzaku, amanye amazwe amaninzi awalindelekanga ukuba athathe inxaxheba kwaphela.
I-Advantage yokuba oonozakuzaku bavote endaweni yabaphathiswa bezokhenketho
Abathunywa kulula kakhulu ukuba bakholwe nguNobhala-Jikelele. UZurab kufuneka asiphephe isicelo sevoti eyimfihlo ukuze aqinisekise ukuqeshwa kwakhe kwakhona.
Kufuneka abe nesininzi se-2/3 yamazwe angamalungu ahambayo avotela ukuqinisekiswa kwakhona.
Umntu uyazibuza ukuba mangaphi amazwe angamalungu, angakwaziyo ukuhlawula iminikelo yawo kwaye efuna uncedo olunentsingiselo oluvela kwi-arhente yeZizwe eziManyeneyo, anokuthi azincame ezo zenzo zigqithise ngolo hlobo.
UZurab uyakuthanda ukonwabisa, kwaye oko bekusoloko kumsebenzela.
Ngobusuku ngaphambi kokuba iBhunga eliLawulayo livotele ukunyulwa kwakhe kwakhona eMadrid kunye nentshukumo eyimfihlo yeWorld Tourism Organisation, isidlo esilungiselelwe ukunyoba amazwe angama-34 songezwa kwinkqubo yoNyulo lwe-UNWTO ngoJanuwari 2021.
Umpheki odumileyo waseSpain uDani García uya kulungiselela isidlo sokunyoba kwi-Four Seasons Hotel eMadrid ehlawulwe kwaye ihanjelwe nguMphathiswa Wezangaphandle waseGeorgia.
Oku kwenza ukuba umviwa okuphela kwakhe okhuphisana noZurab akhathazeke kakhulu kwaye kwabangela amashiya kuyo yonke indawo. Umgqatswa okhuphisanayo ovela eBahrain akazange abekho kwisidlo sangokuhlwa.
Kwi-2017 isidlo sakusihlwa satshintshwa ngokumema abathunywa abavotayo kumdlalo webhola othengisiweyo, ngoncedo lwe-ambassy yaseGeorgia eMadrid.
I-UNWTO izimisele ukunyoba amazwe angama-34 ngeSidlo sangokuhlwa, eGeorgia…
I-UNWTO yekaNobhala-Jikelele: Ilahlekile…
Ukutyhola uNobhala-Jikelele we-UNWTO kumenza ijaji…
Unyulo lwe-UNWTO lubulale nasiphi na isidima esishiyekileyo…
Ukungahloneli kwe-UNWTO ngokuchasene ne-Bahrain kukwaphulwa kwe-JIU…
UGeoffrey Lipman ubiza iSidima kwi-UNWTO…
Njengesiqhelo, eTurboNews wazama ukuqinisekisa nge-UNWTO, kodwa akukho mpendulo ifunyenweyo. Bon Apetit!